युगसम्बाद साप्ताहिक - सेलाएको कि नयाँ रणनीति बुन्दै
Wednesday, 01.29.2020, 02:23am (GMT+5.5) Home Contact
सेलाएको कि नयाँ रणनीति बुन्दै
Thursday, 02.18.2016, 07:46am (GMT+5.5)
काठमाडौं । भारतले नेपालमा अघोषित रूपमै नाकाबन्दी हटायो । मधेशवादी दलहरूले माग पूरा नहुँदै आन्दोलनको स्वरूप फेरे । यी दुई राजनीतिक घटनाक्रम बाहिरबाट हेर्दा सकारात्मक छन् । छ दर्जनभन्दा बढीको ज्यान लिएको, खर्बौंको नोक्सान भएको मधेश आन्दोलन भारतलाई नाकाबन्दी लगाउनकै लागि मात्र थियो त ? एकाएक आएको नयाँ परिस्थितिले आमजनतामा अनेक प्रश्न उब्जाएको छ । अहिलेको स्थिति नयाँ रणनीतिका लागि त हैन भन्ने जिज्ञासा पनि पैदा भएको छ । किनभने ऐतिहासिक संविधानसभाले सविधान जारी गरेपछि उत्पन्न हुनुपर्ने आशाको संचारको विपरीत मधेश आन्दालन जसरी उठ्यो र उठाइयो यसको लाभ कसले लिए भन्ने गहन सवालसंगै उपरोक्त जिज्ञासा उठेको छ । किनभने मधेशवादीहरूले धेरै पाएका छन्, तर सन्तुष्ट छैनन् । अनि आन्दोलनको हुँकार कायमै छ ।
भारतले संविधान जारी हुँदा स्वागत गरेन र नाकाबन्दी गर्याे । तर, संशोधन स्वागत गर्ने तर मधेशवादीले बिरोध गर्ने ! यो एउटा रणनीति मात्रै हो भोलिका दिनमा नेपालमाथि दवाव सिर्जना गर्नका लागि । तीन दलको सहमतिमा संसदले संविधान संशोधन गरेर समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकको १७ प्रतिशत भूभागले अब बाँकी ८३ प्रतिशत भूभागकै जति निर्वाचन क्षेत्र पाएको छ ।
मधेशवादीहरू र भारतीयले नागरिकतामा विभेद गरेकको र नेपालमा बिवाह गरेर आउने भारतीय महिलाले नागरिकता नपाउने व्यवस्था गरेको निराधार हल्ला खडा गरेर मधेशमा आक्रोश उत्पन्न गराउन खोजिए पनि कालान्तरमा त्यो असफल भयो । संविधान जारी भएयता झण्डै एक हजारजनाले अंगीकृत नागरिकता लिइसकेको समाचार बाहिर आउनासाथ जनताको मुड बदलियो ।
त्यस्तै कायम संसदमा एक दर्जनभन्दा बढी अंगीकृत नागरिक सदस्य रहेको तथ्य संसद सचिलायले बाहिर ल्याएपछि मधेश आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण नारा शिथिल भयो । सिमांकनका हकमा मधेशभित्रै हिमाल, पहाड र तराई एक हुनुपर्छ भन्ने रह्यो । त्यसैले आन्दोलन शिथिल हुँदैगयो । भारतले संविधान संशोधनको स्वागत गर्याे भने बिहारमा शरण लिन गएका मधेशवादीहरूले त्यहाबाट पनि साथ पाएनन् । अन्ततः उनीहरूले चलाइरहेको सीमा नाकाबन्दी, धर्ना, बन्द जस्ता सबै कार्यक्रम फिर्ता लिए ।
सोमबार घोषित रूपमै मधेशवादी दलहरूले ५ महिनादेखि चलाइरहेको अबरोधपूर्ण आन्दोलन स्थगित गर्नुको कारण तराईमै उत्पन्न आक्रोश एउटा हो भने भारतको असहयोग अर्काे प्रमुख कारण हो । काठमाडौंको दानापानी बन्द गर्ने भनिए पनि काठमाडौंमा नाकाबन्दीको खासै असर गरेनन बरू तराईको जनजीवन अस्तव्यस्त भयो ।
अहिले नाकाबन्दी, बन्द, हडताल जस्ता कार्यक्रम फिर्ता भएपछि मध्य तराईका जिल्लामा चहलपहल बढेको छ । स्थानीय ढुक्कले कामकाजमा फर्केका छन् । ज्यालामजदुरी सुरू भएपछि छाक टार्न सहज भएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् ।
लामो बन्द खुलेपछि जनजीवन सहज बनेको छ । जनजीवन कष्टकर हुँदै गएपछि आन्दोलनको स्वरूप बदल्न मोर्चालाई दबाब बढदै गएको थियो । नाकाबन्दी फिर्तापछि जनजीवन सहज बन्दै गए पछि इन्धनको अभावा कायमै छ । पहिलेजस्तै अवस्था आउन अझै केही समय लाग्छ ।
यतिबेला मधेशी मोर्चाका प्रमुख नेताहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र महेन्द्र रायको गृहजिल्लामा खुसीयाली छाएको छ । ती जिल्लाका किसान, व्यवसायी, उद्योगी सबै खुसी देखिएका छन् । उखु किसानहरू चिनीमिलमा उखु बेच्न सक्रिय छन् ।
संविधान जारी हुनुअघिदेखि चलेको मधेश आन्दोलनले ५० जनाभन्दा बढीको ज्यान लियो । खर्बाैंको नोक्सान भयो । भूकम्पले गरेकोभन्दा बढी नोक्सानी मधेश आन्दोलनमा भयो । तर, आन्दोलन टुंगिसकेको छैन । मधेशवादी नेताहरू नेपालको नेता हुन नसकेको आरोप मधेशभित्रै हुन थालेपछि उनीहरू राजधानी र पहाडी जिल्लामा समेत आन्दालन गर्ने भन्दै पुरानो कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन् ।
नाकाबन्दी फिर्तासंगै मधेशसंगै मुलुकको अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ । देशको सबभन्दा ठूलो भन्सार नाका वीरगञ्जबाट इन्धन भित्रिन थालेको छ । दुई दिनमै १३ लाख लिटर इन्धन भित्रिएको छ । वीरगञ्जमा व्यापारीक चहलपहल बढेको छ ।
पछिल्लो २ महिनायता मुलुकका अन्य नाका सहज भए पनि वीरगन्ज नाका भने बन्दै थियो । नाका सुचारू नहुँदा बन्दव्यापार प्रभावित थियो । शुक्रबारदेखि नाकाको अवरोध हटेसँगै जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ ।
आर्थिक नगरी तथा मुलुकको प्रवेशद्वार मानिने वीरगन्ज बिस्तारै पुरानै अवस्थामा फर्किंदै छ । बजार, पसल, शिक्षण संस्था, सरकारी कार्यालय खुल्दै छन् । मुलुककै सर्वाधिक ठूलो औद्योगिक करिडोर पर्सा,बारा औद्योगिक करिडोरका उद्योग क्रमशः खुल्दै गएका छन् ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रदीप केडियाले दिएको जानकारी अनुसार सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाहबाट कच्चा पदार्थ ल्याएका तथा सीमापारि रक्सौलमा कच्चा पदार्थ थन्किएर बन्द भएका उद्योगले त्यहाँबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उद्योग सञ्चालन हुन थालेको छ ।
नबन्ने भो माथिल्लो तामाकोसी २०७३ भित्र (02.18.2016)
देशको असामान्य अवस्थामा वाञ्छित सुधारको अभाव (01.13.2016)
दश वर्षपछि राज्यको निकायबाट मनाइयो एकता दिवस (01.13.2016)
पुनःनिर्माणमा सत्र प्रकारका घर (01.13.2016)
पञ्चेश्वर पनि नदीजोडका लागि (01.13.2016)
नेपाल र नेपालीको आधारको भार परित्याग गरेको छैन (01.13.2016)
ओली सरकार पनि असफलतातिरै अग्रसर ! (01.05.2016)
यसरी हुँदैछ देश टुक्र्याउन ग्य्राण्ड डिजाइन (01.05.2016)
कहिले निस्कन्छ निष्कर्ष ? (01.05.2016)
पृथ्वीनारायण शाहको योगदान नभुलौँ (01.05.2016)
शिथिल भैसकेको मधेश आन्दोलन पुनः किन चर्किदै छ ? (12.22.2015)
राष्ट्रपतिलाई त यस्तो ? सामान्य महिलालाई कस्तो ?? (12.22.2015)
पुरानो कानुनले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा समस्या (12.22.2015)
बाटो खुल्यो पुनःनिर्माणको (12.22.2015)
एकातिर नाकाबन्दी, अर्कोतिर बाँध (12.15.2015)
सरकारले खुट्टा कमायो : देशले तत्काल निकास नपाउने (12.15.2015)
हिंसाले पाउने केही हैन (12.15.2015)
देशमा अकल्पनीय संकटको अवस्था (12.01.2015)
आफ्नालाई विदेशीले गोली हान्दा पनि मौन (12.01.2015)
कांग्रेसको अहिलेको बाटो र पाटो के हो ? (12.01.2015)